(၅) နှစ်ပြည့်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် တဲ့နေ့လေးမှာ အမှတ်တရ ပုံရိပ်လေးေ တွနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့မှောက်ကို ပြန်လည်ရော က်ရှိလာတဲ့ မြင့်မြတ် – Shwe Likes
မင်္ဂလာနှ စ်ပတ်လည် (၅) နှစ်ပြည့် တဲ့နေ့လေးမှာ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့မှောက်ကို ပြန်လည်ရော က်ရှိလာတဲ့ မြင့်မြတ်
ပရိသတ်တွေ ချစ်ကြတဲ့ မင်းသားေ ချာ မြင့်မြတ် ကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ် ကားတွေမှာ စတင်သရုပ်ဆောင် ခဲ့ရင်း အခုဆိုရင် တစ်နိုင် ငံလုံး မချစ်တဲ့သူ မရှိလောက်အောင် ကျော်ကြားတဲ့ နိုင်ငံကျော်မင်း သား တစ်လက်တောင်ြ ဖစ်လို့နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်ကတော့ အက ယ်ဒမီဆုထက် ပရိသတ်ေ တွအတွက် ရသကောင် းတစ်ခုပေးစွမ်းနိုင်မယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားတွေကိုသာ ရိုက်ကူးဖို့ ကြိုးစားနေ သူတစ်ေ ယာက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ေ တွချစ်ကြတဲ့ မင်းသားချော မြင့်မြတ် ကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ် ကားတွေမှာ စတင်သရုပ်ဆောင် ခဲ့ရင်း အခုဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံး မချစ်တဲ့သူ မရှိလော က်အောင် ကျော်ကြားတဲ့ နိုင်ငံကျော်မင်းသားတစ်လက်တောင်ဖြစ်လို့နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ် ကတော့ အကယ်ဒမီဆုထက် ပရိသတ်တွေအတွက် ရသကောင် းတစ်ခုပေးစွမ်းနိုင်မယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားတွေကိုသာ ရိုက်ကူးဖို့ ကြိုးစားနေသူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြင့်မြတ်တို့ ဇနီးမောင်နှံနှ စ်ယောက် ကတော့ အပြန်အလှန် ကူညီဖေးမကြရင်း ချစ်ခင်ကြင်နာလာကြ တာ အခုဆိုရင် မင်္ဂလာနှ စ်ပတ်လည် (၅) နှစ် တိတိပြည့် သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မြင့်မြတ်က သူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပ တ်လည်နေ့လေးမှာ “Happy 5years Anniversary Day မတင်တာကြာတော့ မေ့နေကြပီ လားဆိုပြီး” အမှတ်တရပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မြင့်မြတ်တို့အတွက် ဆုတောင်းစကားလေး ရေးပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်.. Source: Myint Myat
မဂၤလာႏွ စ္ပတ္လည္ (၅) ႏွစ္ျပည့္ တဲ့ေန႔ေလးမွာ အမွတ္တရပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔အတူ ပရိသတ္ေတြရဲ့ေရွ႕ေမွာက္ကို ျပန္လည္ေရာ က္ရွိလာတဲ့ ျမင့္ျမတ္
ပရိသတ္ေတြ ခ်စ္ၾကတဲ့ မင္းသားေ ခ်ာ ျမင့္ျမတ္ ကေတာ့ ဗီဒီယိုဇာတ္ ကားေတြမွာ စတင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ခဲ့ရင္း အခုဆိုရင္ တစ္နိုင္ ငံလုံး မခ်စ္တဲ့သူ မရွိေလာက္ေအာင္ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ နိုင္ငံေက်ာ္မင္း သား တစ္လက္ေတာင္ျ ဖစ္လို႔ေနၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သ႐ုပ္ေဆာင္ ျမင့္ျမတ္ကေတာ့ အက ယ္ဒမီဆုထက္ ပရိသတ္ေ တြအတြက္ ရသေကာင္ းတစ္ခုေပးစြမ္းနိုင္မယ့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ ကားေတြကိုသာ ရိုက္ကူးဖို႔ ႀကိဳးစားေန သူတစ္ေ ယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ေ တြခ်စ္ၾကတဲ့ မင္းသားေခ်ာ ျမင့္ျမတ္ ကေတာ့ ဗီဒီယိုဇာတ္ ကားေတြမွာ စတင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ခဲ့ရင္း အခုဆိုရင္ တစ္နိုင္ငံလုံး မခ်စ္တဲ့သူ မရွိေလာ က္ေအာင္ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ နိုင္ငံေက်ာ္မင္းသားတစ္လက္ေတာင္ျဖစ္လို႔ေနၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သ႐ုပ္ေဆာင္ ျမင့္ျမတ္ ကေတာ့ အကယ္ဒမီဆုထက္ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ရသေကာင္ းတစ္ခုေပးစြမ္းနိုင္မယ့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ ကားေတြကိုသာ ရိုက္ကူးဖို႔ ႀကိဳးစားေနသူ တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမင့္ျမတ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွ စ္ေယာက္ ကေတာ့ အျပန္အလွန္ ကူညီေဖးမၾကရင္း ခ်စ္ခင္ၾကင္နာလာၾက တာ အခုဆိုရင္ မဂၤလာႏွ စ္ပတ္လည္ (၅) ႏွစ္ တိတိျပည့္ သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမင့္ျမတ္က သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံရဲ့ မဂၤလာႏွစ္ပ တ္လည္ေန႔ေလးမွာ “Happy 5years Anniversary Day မတင္တာၾကာေတာ့ ေမ့ေနၾကပီ လားဆိုၿပီး” အမွတ္တရပုံေလးေတြကို တင္ေပးလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ျမင့္ျမတ္တို႔အတြက္ ဆုေတာင္းစကားေလး ေရးေပးခဲ့ၾကပါအုံးေနာ္.. Source: Myint Myat
ဘေဘီလေးနှစ်ယောက်မွေးထားပေမယ့်လည်း ခုချိန်ထိ မြင်သူတိုင်း အားကျရလောက်တဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ နုပျိုလှရက်လွန်းနေတဲ့ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း